Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo kulan la yeeshay wefdi ka socda IGAD - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo kulan la yeeshay wefdi ka socda IGAD
August 19, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo kulan la yeeshay wefdi ka socda IGAD. Sawirka: Villa Somalia.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo wefdi uu hoggaaminayo xoghayaha guud ee urur goboleedka IGAD, Maxbuub Macalin ayaa maanta oo Jimce ah kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada Viila Soomaaliya ee Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray shir madaxeedka IGAD oo bisha soo socota ee September lagu qaban doono caasimada Soomaaliya, Muqdisho.
Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay arrimaha amniga, siyaasada, dhismaha maamulka gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ah ee ay haayadaha caalamiga iyo IGAD ka fulinayaan Soomaaliya iyo iskaashiga arrimaha horumarinta ee labada dhinac.
Madaxweynaha ayaa wefdiga uga warbixiyey xaaladda dalka, diyaargarowga Shir Madaxeedka IGAD, horumarka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee dalku gaaray iyo qabanqaabada doorashada 2016.
Labada dhinac ayaa isku afgartay dhammaan qodobadii ay ka wadahadleen, iyadoo xoghayaha guud ee IGAD Maxbuub uu sheegay in IGAD ay si buuxda u taageerayso Soomaaliya, gaar ahaan barnaamijyada muhiimka u ah xilliga kala guurka.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa $17 milyan siinaya Soomaaliya si ay uga caawiso jawaabta dalka ee ku aadan xanuunka coronavirus, sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya maanta oo Khamiis ah. “Caawimaada ayaa gacan [...]